UGAAR AH RAGGA: Afartaan Sababood Ayaa Kuu Diiday Inaad Hesho Gabar Aad Guursato | Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»UGAAR AH RAGGA: Afartaan Sababood Ayaa Kuu Diiday Inaad Hesho Gabar Aad Guursato
UGAAR AH RAGGA: Afartaan Sababood Ayaa Kuu Diiday Inaad Hesho Gabar Aad Guursato
Hani Osman Send an email December 18, 2018
Maxay yihiin sababaha ay rag badan wali doobab u yihiin? Calafku waa halkiisa balse waxaa jira sababo kale oo ragga qaar ay wali doobab u yihiin.
Aan hoos ka aqrino cilladahaas.
1. Iskuma kalsoonid
Waa maxa kalsooni? waa inaad si fudud u aaminsanaataa naftaada iyo kartidaada. Kalsoonida waa mid kamid ah wax yaabaha aasaasiga ah ee ay u baahantahay naftaada si aad wax walba ugu guuleysatid. Kalsooni la’aan meelna ma gaari doontid. Nin isku kalsoon gabar kasta ayuu utagi karaa una sheegi karaa dareenkiisa balse nin aanan isku kalsooneyn oo xishoonaya wuuka labalabeeyaa kahor inta uusan aadin, haddii aadan kalsooni isku qabin kuma guuleysan doontid waxaa kuu wanaagsan inaad si wanaagsan isku soo diyaariso, ma jirto gabar rabta nin aanan isku kalsooneyn.
2. Ka cabsasho diidmo
Nin isagoo isku kalsoon hadana wuu ka baqi karaa in gabadha ay diido. Ma ahan mdi xishoonaya balse wuxuu dareemayaa in sababaha qaar gabdha uu doonaya aysan ku rabin. Cabsida waa biloowga guul darada, naftaada ka saar cabsida waxaadna arki doontaa inaysan jirin cid kaaga dhow guusha.
3. Xirfadaha hadalka oo liita
Waxaan arkay rag si weyn isku kalsoon isla markaana aanan ka baqeyn inay utagaan gabadha ay jecelyihiin balse dhibaatada ay qabaan ayaa ah hadalka, haddii aad aaminsantahay inaad dhibaatadana qabtid waxaad u baahantahay inaad ka shaqeyso intaadan gabar usoo dhowaan.
4. Dib udhigid
Waxaad maanta sameyn karto inaad berri la sugto ayaa dhibaato kale ah. Waan ognahay rag badan ayaa sidaas sameeya illaa maalinta dambe uu wiil kale oo dafaaye ah oo ka yimaado isla markaana jacaylkiisii uu halkaas ku qaato.
Afrtaan waxyaabood ayaa ah afar sabab oo ragga diyaarka u ah haasaawaha ay wali doobab u yihiin, ogoow cilladaada oo iska hagaaji.
Doob Doobab Gabar Kalsooni Kalsooni darro Rag Xiriirka
6 Tilmaamood oo lagu garto ninka aanan ku jecleyn gabaryahay (Calaamadahan ayuu Leeyahay)
5 Nooc Oo Dumarka Kamid Ah Oo Ay Tahay Inaadan Iska Sii Deyn Haddii Aad Mustaqbal Rabtid
Marnaba Saddexdaan Waxyaabood Haku Oran Sodohdaa [Iska Ilaali]
Haweeney Kasta Waa Inay Waxyaabahan Guriga Ugu Sameysaa Ninkeeda
Ragga Oo Lixdaan Meelood Ka Eega Dumarka
7 Waddo oo Lagu Garto Saaxiibka Dhalanteedka ah
4 ways to spice up your marriage or relationship
Garoobbada Koofur Galbeed oo is garabsanaya
7 FOODS THAT CAN HELP IMPROVE YOUR DIGESTIVE SYSTEM
Waa kuwaan 5 Eray oo qiimo leh oo nin kasta uu doonayo inuu xaaskiisa ka maqlo waqti waliba
Talooyin-kaan qaado oo bad baadi guur qarka u saaran burbur
Faa’idooyinka Caafimaad Ee Timirta & Cudurro Halis Ah Oo Ay Ka Hortagto
This Is How Celebrity Brides Really Prep Their Skin For The Big Day